လင်္ကာ: ၀န်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်
၀န်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည်မရောက်ခင်မှာ ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးက ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ စာ တစောင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးထားပါတယ်။သံရုံး ၀က်ဆိုက်မှာ အင်္ဂလိပ် မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ အခုလို တွေ့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ မသိ၊ မြန်မာ လိုတော့ ဖတ်လို့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
၀န်ကြီးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်
ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်(ထ်) ခယ်မရော(န်) မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် သမိုင်းဝင် ခရီးစဉ် မတိုင်မီ မြန်မာနိုင် ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အယ်(န်)ဒီ ဟေး(န်)က ကြိုတင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ သင်္ကြန်ရေပွဲတော် အရှိန်အဟုန်အပြည့်ဖြင့် ဆင်နွှဲနေခိုက်တွင် သူ၏ ဧည့်သည်တော်ကြီး ရေတွေ စိုစိုရွှဲမကုန်ပါစေကြောင်း သူက ဆုမွန်တောင်းနေပါလေ၏။
“မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကို ပြန်ကြည့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ရောက်လာမယ့် ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာဖြင့်ရင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ အကြီးအကဲတစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်တဲ့ တကယ့် ပထမဦးဆုံး ခရီးစဉ်ဖြစ်နေတာ တော်တော်ကြီး သေချာသွားပါတယ်။ “သမိုင်းဝင်”ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို တစ်ခါတလေ ကျတော့ သည်လိုပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ လျော့လျော့ရဲရဲ သုံးလေ့ရှိကြပေမယ့် သည်ခရီးစဉ်ဟာဖြင့်ရင်တော့ တကယ့် သမိုင်းဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ ကျိန်းသေလှပါတယ်။
သမိုင်းဝင်သလို မယုံနိုင်စရာလည်း အတော့်ကို ကောင်းလှပါတယ်။ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ ကျွန်တော် သည်ကို ရောက်လာတုန်းက အဲသလို ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် လာရောက်မယ့် ခရီးစဉ် မျိုး ပေါ်ပေါက်လာမယ့် အလားအလာဟာ ဘယ်လိုမှကို မဖြစ်နိုင်လွန်းလှသလို ယုတ္တိလည်း မတန်လွန်း လှတဲ့ အလားအလာမျိုးပါ။
သည်ကို ရောက်ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော် လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အလုပ်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အမှုကို တရားရုံးက ကြားနာစစ်ဆေးနေတာကို သွားရောက် နားထောင်ခြင်းပါပဲ။ (သူ့ကို အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ရာ) နေအိမ် ပရိဝုဏ်ရဲ့ဘေးက ရေကန်ကျယ်ကြီးကို ဖြတ်ကူးပြီး မခေါ်မ ပင့်ဘဲ ရောက်ရှိလာခဲ့သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား တစ်ယောက် သူ့အိမ်ကို ရောက်ရှိလာတာနဲ့ ပတ် သက်ပြီး စွဲဆိုထားတာများအတွက် တရားရုံးကို သူရောက်နေခဲ့ရချိန်ပါ။ သူ့ကို အလုပ်ကြမ်း နဲ့ ထောင် ဒဏ် သုံးနှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ (နောက်ပိုင်းမှာတော့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် သက်တမ်း ၁၈ လ ထပ်တိုး တဲ့နည်းနဲ့ သည်ပြစ်ဒဏ်ကို လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့ပါတယ်။) ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသူများမှာ ရင်ဆိုင်ကြရမယ့် ဒုက္ခပေးမှု၊ ဒါမှမဟုတ် သည့်ထက်ဆိုးဝါးတာတွေ မကြုံတွေ့ရလေအောင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ချိန်းဆို မှု နေ့စဉ် မှတ်တမ်းကို သေသေချာချာ ဂရုတစိုက် ထိမ်းသိမ်းလျှို့ဝှက်ထားရှိခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်တုန်းက ဆန္ဒပြပွဲ များကို နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်ရစရာတွေကလည်း လူတို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးတွေထဲမှာ အဲဒီ့အချိန်က လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး ရှိနေခဲ့ဆဲပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးသားထားတာတွေ အများကြီး ရှိနေနှင့်ပြီးဖြစ်တာမို့လို့ သည်နေရာမှာ အဲဒါတွေကို ကျွန်တော် ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် သည်ခရီးစဉ်အကြိုနေ့မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လလောက်အထိက သည်နိုင်ငံမှာ တိုးတက်မှုအရိပ်လက္ခဏာက အနည်းအပါးသာ ရှိနေခဲ့ပုံရ တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပြန်ကောက်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ဧပြီလတစ်ရက်နေ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲများဆီအထိ ဦးတည်နေတဲ့ အပြောင်းအ လဲတွေဟာ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်ဘဲ စတင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရော ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည်တို့ကပါ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့အကြောင်းကို မဆိုင်းမတွ ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များဟာလည်းပဲ ပြီးပြည့်စုံဖို့ အဝေးကြီး လိုနေပါသေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများနဲ့ ရင်ကြားစေ့ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကို သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်က အလေး အနက်ထား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်က ဖြေရှင်းရဦးမယ့် အရေးကိစ္စ အခက်အခဲတွေအများအပြား ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနဲ့ DFID ဝန်ကြီးတို့ရဲ့ ခရီးစဉ် များနောက်မှာ ဆက်လက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ သည် ခရီးစဉ်ဟာ သည်လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ ဒုတိယ အဆင့်ကို စတင်လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ထောက်ခံ အားပေးလိုတဲ့ ဗြိတိသျှ အစိုးရရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်ဘဝ အခြေအနေများနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအရ နေရာလပ် ဖွင့်ပေးခဲ့မှုကြောင့် မြင် သာထင် သာရှိလှတဲ့ အပြောင်းအလဲတချို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀ % လောက်သာ တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ အခုဆိုရင် အနောက်တိုင်းနဲ့ တခြား အာရှတိုက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများဆီက ခရီးသွားဧည့် သည်များနဲ့ ပြည့်လျှံလို့ နေပါတယ်။
ရှေ့မျက်နှာဖုံးမှာ “အမျိုးကောင်းသမီးကြီး (လေဒီ့)”ပုံ မပါရင် သတင်းစာတွေလည်း အဝယ်မလိုက်တော့မယ့် သဘောမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒေါ်စုရဲ့ ရုပ်ပုံပါ ပို့(စ်)ကတ်တွေ၊ တီရှပ်တွေနဲ့ တခြားပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုလည်း လမ်းဘေးဈေးသည်တွေဆီမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်နေကြပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဆိုရင်တော့ အဲသလိုမျိုး ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတာနဲ့တင် သည်ဈေးသည်များခမျာ အဖမ်းခံခဲ့ကြရမှာပါ။ အဲတော့ကာ သည် အချိန် သည်ကို ရောက်နေရတာဟာ အင်မတန်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
သည့်ထက် ပိုထူးလာတာကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိရှိ လေသမျှ လူတွေအားလုံး တစ်စုတစ်ဝေးတည်းနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရေမစိုစိုအောင်၊ မရွှဲရွှဲအောင် အတာရေစင် ပက်ဖျန်းကြရင်း (ကျွန်တော့် မျက်လုံးထဲမှာတော့) အရူးအမူး မြူးတူး ပျော်ရွှင် ဆင်နွှဲကြလေတဲ့ တစ်ပတ်ကြာ မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန် ရဲ့ အကျနေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်က ရောက်ရှိလာတာပါပဲ။ မနှစ်က မနက် ၆ နာရီခွဲ အချိန်ကြီးမှာ ဈေးထဲ ကို ရောက် သွားတော့ ရေကျိကျိချွဲချွဲ၊ နံနံစော်စော်၊ အေးအေးစိမ့်စိမ့်နဲ့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ရွှဲနစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူက ကျွန်တော့်ကို ပက်လိုက်တယ် ဆိုတာ မမြင်လိုက်ရပါဘူး။ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလည်း အလားတူ ရေမျိုး နဲ့ ပက်ထည့်လိုက်ကြလို့ ကျွန်တော့်မှာ အလုပ်သစ် ပြောင်းရှာနေရတဲ့ ဘဝမျိုးနဲ့တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သည် အဆင့်သစ်၊ ခြေလှမ်းသစ်က မစတင်ပါစေနဲ့လို့သာ ဆုတောင်းနေရပါတော့တယ်ခင်ဗျား။”
Prime Minister to visit Burma
British Ambassador to Burma Andy Heyn writes ahead of the historic visit of Prime Minister David Cameron to Burma. Withawater festival in full swing, he hopes his visitor won't be drenched along the way.
"We have checked through the archives and are pretty sure that the Prime Minister’s visit on 13 April will be the first ever to Burma byaBritish head of government. The term “historic” is thrown around too loosely sometimes, but on this occasion it is truly warranted.
Historic and almost unbelievable. When I arrived here in July 2009, the prospect of suchasenior visit was so far-fetched as to be absurd. One of my first engagements here was to attend the court hearing of Daw Aung San Suu Kyi. She was there on charges related to the arrival at her house (where she was under house arrest) of an uninvited US citizen who had swum across the large lake which runs alongside the perimeter of her compound. She was sentenced to three years hard labour (later commuted toafurther 18 months of house arrest). My appointments diary wasaclosely guarded secret to protect people who might face harassment or worse for being seen to meet me. Memories of the repression of the protests in 2007 were still fresh in people’s minds.
There has been plenty written about the changes in Burma which I won’t repeat here. But it is worth recalling on the eve of this visit, that as recently as last August, there seemed little sign of progress here. Then, apparently out of the blue, the changes began, leading to the by-elections on the 1st of April. Both the President and Daw Aung San Suu Kyi have been quick to point out that much more needs to be done – the reform process is far from being complete. For example, the President himself has highlighted the need for ethnic reconciliation. Burma still has many difficult issues to resolve. But the Prime Minister’s visit – following visits in recent months by the Foreign Secretary and the DFID Secretary of State – isaclear statement of the British Government’s intention to support the President and Daw Aung San Suu Kyi as they embark on the second phase of the process.
In terms of daily life, the opening up of political space has led to some very visible differences. Hotels that were at 20% occupancy are now full of tourists from the West and other parts of Asia; it seems newspapers can hardly sellacopy if they don’t haveapicture of “The Lady” on the front. Postcards, t-shirts and all manner of items bearing Daw Suu’s image are freely available from street vendors. The same street vendors would have been arrested if they had tried to sell these productsayear ago. It isafascinating time to be here.
Even more so now with the Prime Minister’s visit coming as it does at the beginning of the Burmese Water Festival;aweek long period of (to my eyes at least) collective madness where people across the country come together to soak each other with water at every possible opportunity. I got drenched at 6.30 in the morning last year inafish market withabucket of slimy, smelly and freezing water. I never saw who did it. I just hope that this new phase in Burma does not begin with me looking foranew job asaresult of the same happening to the Prime Minister."
Mr Maung Ko Thet facebook မှကူးယူဖော်ပြသည်။